Yini ongayidla i-toy-terrier ezinyangeni ezingu-2?
Ukuthi umsoco wezinja uncike kangakanani, empeleni, empilweni yakhe. Yingakho ukukhetha ukudla kwe-puppy-terrier ezinyangeni ezingu-2 kufanele kuthathwe ngokungathí sina. Phela, ama-tuychiks amancane adlala kakhulu. Ngenxa yezici zabantwana abancane, isisindo esiningi sinesingozi kakhulu. Uma kungenjalo, amathambo abo abuthakathaka ngeke akwazi ukubhekana nomthwalo, okuzoholela emiphumeleni engenakuguquka.
Njengoba kuyaziwa, izinsana emasontweni okuqala okuphila ukudla okuyinhloko ubisi lomama. Nokho, kusukela ekuqaleni kwezinyanga ezimbili ubudala, usuvele unakekele ukuhlukahluka kwe "imenyu". Kufanele kube yikuphi ukudla kwe- toy-terrier ezinyangeni ezimbili, futhi yini okufanele ifakwe ekudleni kwansuku zonke kwezingane zakhe ezinemilenze emine, sizokutshela esihlokweni sethu.
Yini ongayidla i-puppy ye-toy-terrier ezinyangeni ezingu-2?
Ngokwephethini evamile yokudla, ezinyangeni ezingu-2 ubudala isilwane sakho kufanele sondliwe okungenani izikhathi 5-6 ngosuku, kubandakanya ubisi lomama. Emva kwezinyanga ezimbili - izikhathi ezingu-4-5.
Uma unquma ukuthi yini ongayidla le puppy ye-toy-terrier ezinyangeni ezimbili, wena ngokwakho, ngaphandle kosizo lochwepheshe, qaphela ukuthi nsuku zonke i-puppy idinga ukuthola "i-cocktail" elinganisiwe yama-protein, amafutha nama-carbohydrate. Ukugcina le mithetho, ungafaka izitsha ezifana nalezi:
i-cottage ushizi (i-cottage ushizi ne-yogurt, isikhuphaphu esibilisiwe nge-1kp ukhilimu omuncu);
inyama ehlelwe kahle (engagciniwe), ingaba isifuba sezinkukhu, i-veal, yenkomo;
i-porridge ephekwe kahle (ungabamba ubisi irayisi
inyama yokudla noma ebilisiwe;
inhlanzi ngaphandle kwamathambo nemifino noma ebilisiwe;
i-omelet esuka kwesigamu seqanda (hhayi kaningi izikhathi ezine ezinsukwini ezingu-10).
Kodwa-ke, ngaphezu kwalokho, kunokuba ungakwazi ukondla i-toy-terrier ezinyangeni ezimbili, kubalulekile ukwazi ukuthi isilwane siyaphikisana. Imikhiqizo enjalo ihlanganisa: imikhiqizo ebhemayo, amaswidi, ama-pickle, inhlanzi ngamathambo, ukudla okunomsoco kanye namasoseji.
Indlela yokuhlomisa i-aquarium?
Ukuzalwa kwamakati wechweba
Ngemuva kokulunywa kwekhaksi, inja yayine-bump
Kungani i-hamster iqoqa i-cage?
Ikati ingakhulelwa nini?
Isobho lezinhlanzi nge-millet
Ukugeza kanjani usana olusanda kuzalwa futhi yini okumele ifakwe ngesikhathi sokuqala inqubo yamanzi?
Ukuhlunga okwesibhakabhaka - ama-classics, ukuklama okuthakazelisayo nemibono emisha
I-Corrugated Paper Crafts
Yenza i-Fall-Winter ngo-2014-2015
Indoda yaseCapricorn - kanjani ukuqonda ukuthi uyathandana?
Ithebula elide labesifazane elinokusikeka ezinhlangothini
Ingabe ngidinga imfundo eyengeziwe kumfazi wanamuhla?
Yenza-ke ngaphansi kwesigqoko se-turquoise
Ibhande lezinwele ngezinwele eziphakathi ngezandla zakho
U-Amber Heard ubonakale e-red carpet okokuqala ngemuva kokuhlukanisa noJohnny Depp
Triph Holy - umthandazo womsebenzi
Indwangu yangasese yangasese